Perricone MD na -agbasawanye mkpokọta Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Perricone MD na -agbasawanye mkpokọta Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy
Perricone MD, akara nke na-ewepụta ihe ịga nke ọma, usoro nlekọta akpụkpọ ahụ nke sayensị na-akwado, na-ekwupụta mgbakwunye ọhụrụ ya na mkpokọta Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy na ọhụrụ Ultra-Smooth Clean Shave Cream.
Pụrụ iche na mkpokọta, ngwaahịa niile nwere 99% dị ọcha Cannabidiol (CBD), nke etinyere na United States, dị ka isi ihe egosipụtara. CBD, nke amaara maka ọmarịcha uru ya, na -enyere aka ịtụte ma mee ka akpụkpọ ahụ kacha nwee nsogbu na nrụgide.
Ude mmiri ịcha ntutu dị nro nke nwere ọmarịcha nwere ọmarịcha ederede nke na-emepụta ala amị amị maka ịkpụ afụ ọnụ mara mma nke ukwuu. Cannabidiol na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu na mmanụ mkpụrụ osisi sativa na allantoin iji mee ka mmiri dị nro ma mee ka anụ ahụ dị nro site na inye anụ ahụ nri nke ukwuu nke na-eme ka ọ dị larịị ma dị nro yana obere ntụpọ, ntụpọ na obere mbepụ. Usoro a na-enweghị sulfate bụ nke na-abụghị comedogenic, vegan, dermatologist-nwalere, National Psoriasis Foundation na ndị ọkachamara ya ghọtara ya.
N'ọgwụgwụ 2021, Perricone MD ga-agbasawanye nchịkọta ahụ na mwepụta nke Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Ultra-Lightweight Calming SPF 35 Veil. Igwe a na-ahụ maka anwụ na-echebe akpụkpọ ahụ pụọ na ụzarị UVA na UVB ka ọ na-eme ka ọ dị jụụ ma na-eme ka akpụkpọ ahụ dị jụụ.
"Site na mwepụta nke Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection na 2020, anyị na -aga n'ihu na mmalite nke ihe ọhụrụ CBD kemgbe mbido mbụ anyị na ngwa na 2017." ka Robert Koerner, Perricone MD, onye isi ahịa ahịa kwuru. "Site na ahịa nlekọta akpụkpọ anụ nke CBD na -aga n'ihu na -eto n'ike n'ike, anyị nwere obi ụtọ iweta onyinye ọhụrụ abụọ a, ebe anyị na -ejigide nkwa anyị na usoro niile dị n'aha a dị ọcha, dị nro ma dịkwa irè."
A nabatara mkpokọta Perricone MD Hypoallergenic CBD Skinitive Skin Therapy na National Psoriasis Foundation kwadoro ya. Site na mgbakwunye a, National Psoriasis Foundation nabatara ahịrị zuru oke nke Perricone MD Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection. Randy Beranek, Onye isi ala na onye isi, National Psoriasis Foundation kwuru, "National Psoriasis Foundation Seal of Recognition na-achọpụta ngwaahịa emepụtara ma ọ bụ nke ezubere ka ọ ghara ịkpasu iwe na nchekwa maka ndị bi na psoriasis na ọrịa ogbu na nkwonkwo." "Obi dị anyị ụtọ na emesịrị mata ude ịkpụ afụ na ndekọ ngwaahịa ngwaahịa Akara anyị."
Nsonaazụ na -ekwu maka onwe ha. N'ime nnwale ndị ahịa, 97% nke ndị nnwale kwuru na ọ naghị akpasu iwe*, 94% kwuru na ọ na-egbochi ọkụ ọkụ, nicks na micro-cuts*, na 92% kwuru na ọ na-enye ohere maka ịkpụ afụ ọnụ nke ukwuu na nke dị mma*.
*Dabere na ọmụmụ ndị ahịa nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 196 mgbe ụbọchị 1 gachara